Mpanamboatra sy mpamatsy vovoka Barite - Pabrika vovoka Barite any Sina
Vovoka barite amidy mafana
1. Mampangatsiatsiaka ny bitro, manala ny potipoti-javatra tapaka, manosotra ny sodina fandavahana, manidy ny rindrin-davaka, manara-maso ny tsindry solika sy entona ary manakana ny fantsakana solika tsy hivoaka.
2. Famokarana simika ny barium carbonate, barium klôro, barium sulfate, lithopone, barium hydroxide, barium oxide sy ny hafa barium Kamban-teny. Ireo karbaona barium ireo dia ampiasaina betsaka amin'ny reagent, catalyst, fanadiovana siramamy, lamba, fiarovana amin'ny afo, afomanga isan-karazany, coagulant ny fingotra synthetic, plastika, famonoana bibikely, famonoana vy, vovoka fluorescent, jiro fluorescent, solder, additive menaka, sns
3. Glass deoxidizer, clarifier ary flux dia mampitombo ny fahamarinan-toerana, ny famirapiratana ary ny tanjaky ny fitaratra
4. Fingotra, plastika, famenoana loko, mpanazava ary fitaovana mavesatra
5. Manamboara fitaovana hanindry ireo fantsona milevina ao amin'ny faritra honahona mba hanitarana ny androm-piainan'ny pavement.
6. Fanafody fitiliana X-ray
Ny vovoka barite, fantatra amin'ny anarana hoe barium sulfate powder, dia manana singa simika amin'ny BaSO4, ary ny kristaly dia an'ny rafitra orthorhombic (rhombic) mineraly sulfate. Matetika izy io dia amin'ny endrika takelaka matevina na kristaly tsanganana, ny ankamaroany dia bloc na takelaka toy ny aggregate granular. Rehefa madio dia tsy misy loko sy mangarahara. Rehefa misy loto, dia holokoina amin'ny loko isan-karazany. Fotsy ny tsipika ary manjelatra ny vera. Mangarahara hatramin'ny mangarahara. Gravité manokana 3.5-4.5.
Plate kristaly, kely hamafin'ny, eo akaikin'ny zoro havanana mifanena amin'ny cleavage tanteraka, hakitroky avo, tsy misy foaming eo anatrehan'ny hydrochloric asidra.